Dagaallo Horleh Oo kasoo Cusboonaday Itoobiya iyo Guulo la kala Sheeganayo. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo Horleh Oo kasoo Cusboonaday Itoobiya iyo Guulo la kala Sheeganayo.
On Sep 13, 2021 182 0
Dalka Itoobiya ayaa waxaa wali ka holcaya dagaalada xooggan ee u dhaxeeya xukuumadda sii daciifeysa ee Abiy iyo qowmiyadda Tikreega.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa lasoo wariyay in dagaalladu ay ka dhaceen laba gobol oo ay kala dagaan Amxaarada iyo Tikreega.
Dagaalka ugu xoggan waxa uu ka dhacay waqooyiga degaanada Amxaarada,kaasoo daba socda dhacdooyin xiriir ah oo tan iyo todobaadkii lasoo dhaafay soo tixnaa.
Waxay ahaayeen dagaalo u dhaxeeyay Amxaarada iyo ciidanka Itoobiya oo garab ah iyo Tikreega, waxaana lasoo warinayaa in labada dhinacba ay isku hilboobeen.
Inkastoo dhan kasta uu guulo ka sheeganayo dagaalka, haddana warbixin ay soo saareen TPLF ayaa waxay ku sheegeen in waqooyiga gobolka Gondor, gaar ahaan magaalada Dabata ay ku dileen ciidan badan oo kamid ah kuwa dowladda.
Qeybaha hore ee warbixinta ayaa waxay ku xuseen in 50 kun oo askari ay ka dhigeen wax ay dilaan, qaar ay dhaawacaan iyo kuwa ay gacanta ku dhigaan islamarkaana ay maxaabiis ahaan u heystaan.
Tigree waxay xuseen in hal dagaal oo dhacay 1-dii bishan September ay ku dileen 17 kun iyo 9 boqol oo milatariga dowladda kamid ah, iyagoo xusay iney dib kasoo sheegi doonaan shacabka Amxaarada ah ee ay xasuuqeen.
Dadka ka faallooda arrimaha millatariga ee ishana ku haya waxa ka socda dalkaas ayaa waxay sheegayaan in kororka khasaaraha ba’an ee labada dhinac kala gaaraya uu u sabab yahay iyadoo dagaalada qaar ay yihiin kuwa toos la isaga hor imaanayo oo la isku hilboobayo iyo ciidamada labada dhinac oo aad u badan oo halmar isku dul dhacaya.
Amxaarada dhankooda waxay sheegeen iney iyaguna askar badan ka laayeen Tikreega soo weeraray degaanadooda, hubna ay ka furteen. Waxa kaloo ay sheegeen in Tigree badan oo buuraha hoos dagay ay ku laayeen dhagxaan waaweyn oo ay dhakada sare ee buuraha uga soo tuureen.
Dagaalka u dhaxeeya dhinacyadaas kuma koobna millatariga oo kaliya ee waxaa jira oo ay isku adeegsanayaan sixirka.
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo maalmihii lasoo dhaafay booqanayay furimaha ayaa u goodiyay qowmiyadda Tigree halka uu guulo ka sheegtay dagaalka.
Furimaha hore oo dhanka Amxaarada ee xiga Gonder waxaa lagu arkayaa malleyshiyaad Soomaali ah oo laga keenay Somaligalbeed kuwaasoo ka barbar dagaallamaya Amxaarada.
Waxaa arrin lala yaabo ah in rag Soomaalinimo sheegayana ay difaacayaan Amxaarada oo illaa maanta gumeysi ku heysa shacabka Jigjiga, heer ay gaareen iney dadka caburiyaan oo kaniisado ka dhistaan halkaas.
Saraakiil Itoobiyaan ah oo ay wehliyaan qaar Soomaali ah ayaa halkaas iyo furimaha u tagay iney la xisaabtamaan ciidamada Soomaalida.
Dagaalada ka holcaya Itoobiya ayaa ah kuwa joogto ah oo ay labada dhinacba ku go’ayaan. Tigreega waxaa ka go’an sida ay sheegayaan iney gacantooda kusoo celiyaan dhul laga heysto halka Amxaaraduna dooneyso iney gacanteeda kusoo celiso dhul ay Tigreegu ka qaateen markii ay talada dalka hayeen.
Intaa waxaa u dheer Tigree in ay dalka xukumaan, haddii kalana lagu kala tago oo ay maamul gooni ah noqdaan.
Hanjabaadaha ugu xooggan waxa ay xilligan kasoo baxayaan Tigreega, Gamrasyoon Gabra miikaa’iil, oo ah madaxweynaha qowmiyaddaas ayaa wuxuu digniin culus u diray dowladda Eratariya taasoo ah iney ciidankeeda kala baxdo dhulkooda.
Hogaamiyahan wuxuu sheegay iney halis ku jiraan ciidanka Eratariga ee jooga galbeedka degaannada Tigree, gaar ahaan gobolka Humeyra oo ay isku heystaan Amxaarada iyo Tigreega.
Isagoo cod dheer ku hadlaya ayaa wuxuu sheegay iney qaadayaan duullaan weyn oo ay cadaab ku dhadhan siinayaan askarta Eratariya haddii aysan isa soo dhiibin, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso hanjabaadaha ay labada dhan isku jeedinayaan iyo dagaalada dib kasoo karaar qaadanaya, waxaa muuqanaysa inaan illaa iyo hadda la kala adkaan , dagaalladuna muddo dheer qaadan doonaan.
Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga ciidan calooshood u shaqeystayaal ah oo uu Mareykanku kasoo kireystay iyo qaar ay iyagu usoo direen cadaawadda ay Soomaalida u qabaan darteed, waxaana haatan qeybo kamid ah Gedo iyo Bay laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo bixitaan, xilli usbuuc ka hor uu taliska Shisheeyaha AMISOM, shaaca ka qaaday in ay soo gaartay warqad ay askarta Itoobiyaanka ku dalbanayaan in lagala wareego degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay iyo degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.